Ungasikhuphela njani isicelo seYouTube kwiFowuni yakho? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 358
Uninzi lwabasebenzisi basebenzisa iYouTube ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni. Ayisiyonto nje intofontofo ngakumbi kwaye kulula ukuyisebenzisa, kodwa naphina apho siya khona sithathela isixhobo esiphathwayo ecaleni. Oku kusivumela ukuba singene eqongeni ngalo naliphi na ixesha nangexesha esifuna ngalo.
Ukuba ungomnye wabo basebenzisi abangasakhuphi usetyenziso lwe-YouTube kwiselfowuni yakho kwaye awazi ukuba ungayenza njani, namhlanje siza kukubonisa nganye amanyathelo omele ukulandela ukuba le app ifakelwe kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Izibonelelo zokusebenzisa iApple App
Ukukhuphela usetyenziso lweselfowuni lukaYouTube kubonelela ngezibonelelo ezinomdla Inguqulelo yedesktop engenayo. Esinye sezibonelelo eziphambili sinento yokwenza nokufikelela ngokulula.
Asizukufuna ukuphatha ikhompyuter naphi na ukuze ukwazi ukungena kwiqonga leYouTube. Ngokufaka isicelo kwiselfowuni, sinokonwabela wonke umxholo ogcinwe kweli qonga.
Umsebenzisi une intuthuzelo enkulu xa ufikelela kuYouTube ngokusebenzisa usetyenziso, ukuqala kwinto yokuba ungayenza nanini na, naphi na.
Ngaphandle koko, i Iindawo ezinamaqhosha okufikelela zisasazwa ngcono kwisicelo kunakwinguqulelo yedesktop. Apha kulula kakhulu ukufumana izinto kuba yonke into ilapho kufanele ukuba ibekhona. Akukho nto iseleyo, akukho nto ilahlekileyo.
Isetyenziswa ngakumbi kwiselfowuni kunakwidesktop
Amanani aqinisekisa oko. Isicelo seYouTube esiphathwayo asihlali nje kuphela kodwa ikwayinguqulelo esetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi beli qonga.
Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube lweselula lwamkelwe kakuhle ngabasebenzisi beqonga ngalinye. Kakhulu kangangokuba namhlanje kunjalo isetyenziswe ngakumbi kunenguqulo yedesktop uqoboMasithi wayenguvulindlela kuwo wonke lo mbandela.
Namhlanje usetyenziso lweselfowuni lwe-YouTube lubonelela ngezixhobo kunye nemisebenzi enomdla. Ngale nguqulo, abasebenzisi banethuba lokwenza izinto ezahlukeneyo, phantse yonke into abasetyenziselwa ukuyenza kwikhompyuter:
Yeka ukulandela umxholo
Yabelana ngevidiyo nabanye abasebenzisi
Cima amagqabantshintshi kwisiteshi sethu
Amanyathelo okukhuphela i-YouTube App kwi-Android
Ukukhuphela usetyenziso lweselfowuni lwe-YouTube lwe-Android yenye yezona zinto zilula kwaye kulula ukuyenza. Ekuphela kwento esiza kuyidinga siselfowuni esinonxibelelwano lwe-intanethi.
Inyathelo lokuqala liya kuba fikelela kwivenkile yeapp igosa le-Android (iVenkile yokudlala)
Ibhokisi yokukhangela iya kubonakala phezulu kwesikrini. Apho kuya kufuneka bhala igama lokusebenza ufuna ukukhuphela, kule meko kufuneka ubhale "i-Youtube"
Iziphumo ezahlukeneyo ziya kuboniswa kuwe. Khetha ukhetho oluchanekileyo kwaye ucofe kwiqhosha "Faka".
Espera ukukhuphela ukugqiba kwaye uvule i-YouTube Mobile ukumisela iakhawunti yakho.
1 Izibonelelo zokusebenzisa iApple App
2 Isetyenziswa ngakumbi kwiselfowuni kunakwidesktop
3 Amanyathelo okukhuphela i-YouTube App kwi-Android
Ungabelana njani ngezithuba kwi-Twitter?